Ogaden News Agency (ONA) – Faah Faahinta Wacdarihii Xalay Kadhacay Magaalada Edmonton ee Dalka Canada.
Faah Faahinta Wacdarihii Xalay Kadhacay Magaalada Edmonton ee Dalka Canada.
Posted by ONA Admin	/ September 7, 2015
Waxaa munaasab lagu xusayo aas aaskii 31aad ee Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogadenia (JWXO) ay jaaliyadaha Somalida Ogadenya ee ku dhaqan gobolka Alberta ee dalka Canada kuqabteen magaalada Edmonton. Waxaana kasoo qaybgalay munaasabadan wafdiyo ka kala yimid magaalooyinka Winnipeg Fortmcmurray, iyo wafdi uu hogaaminaayo Afhayeenka JWXO Mudane Cadaani oo kayimid dalka Australia iyo magaalada Toronto.
Waxaa xafladan lagu furay wacdi diini ah oo uu soo jeediyey Sheekh Cismaan oo kamid ah culimada ugu waaweyn gobolka Alberta. Xidhiidhiyaha munaasabada Mudane Maxamed Dubad (Abshir) ayaa ku soo dhaweeyay Gudoomiyaha Jaaliyada Edmonton Axmed Cali Qabxun oo halkaa kasoo jeediyay khudbad kooban oo aad u qiimo badan.
Waxaa shirka lagu soo dhaweeyey isuduwaha jaaliyadaha Canada Mudane C/xakiin Maxamed Wali oo ka warbixiyay xaalada dhamaan jaaliyadaha dalka Canada meesha wax u marayaan iyo sida ugu haboon ee hawlaha halganka loo sii dardar galin lahaa isagoo shacabkii madasha iskugu yimid uga mahadceliyey sida wanaagsan eey munaasabadan uga soo qayb galeen.
Sidoo kale waxaa halkaa warbixin aad u dheer oo ka hadlaysa xuquuqul insaanka iyo sida ay ugu tumanayso Itoobiya kasoo jeediyay Dr. Maxamuud Ugaas oo runtii halkaa kusoo bandhigay filimo maqal iyo muuqaal ah oo xaqiiqada ka hadlaya taasoo shacabkii Somaaliyeed ee xaflada kasoo qaybgalayna argagax kuriday waxayna yaqiinsadeen waxa dhabta ah ee kajira dhulka Somalida Ogadenya ee Gumaysiga kuhoos jira.
Waxaa gabay luuqada Ingiriiska ah ka jeediyay wiil yar oo dhalinyaro ah oo ku guulysatay billada lasiiyo dadka gabyaaga ah (Spoken Word Poet) magaciisana layiraahdo Ahmed wuxuuna ka hadlayay Midnimada, Wadaniyada iyo Midnimada Somalia gumaysina ayna ogolayn. Waxaa lagusoo dhaweeyay cod baahiyaha aqoonyaho Somaaliyeed oo halkaa hadallo muhiim ah kasoo jeediyay dadwaynihii
isugu yimid munaasabada. Waxayna halkaa ku muujiyeen taageerada ay halganka u hayaan iyagoo balan qaaday ineey halganka hiil iyo hooba lagarab istaagi doonaan wixii hada kadambeeya.
Waxaa madashii xaflada lagusoo dhaweeyay Afhayeenka JWXO ahna Gudomiyaha Hogaanka Abaabulka iyo Arimaha Jaaliyadaha (HAAJ) Mudane Cadaani. Waxaa markaliya madashii xaflada isqabsaday sacab iyo mashxarad lagu soo dhawaynayo Afhayeenka JWXO. Wuxuu halkaa kasoo jeediyay khudbad aad u qiimo badan oo meelo badan taabanaysay sida siyaasada Geeska Afrika, Ogadeniya iyo xaalada shacabka Somalida Ogadeniya ku suganyahay isagoo aad ugu dheeraaday maanta Itoobiya ineey waxba isla haynin ooy burbur taagantahay loona baahanyahay in la is dabaraaciyo.
Wuxuu intaas raaciyay Mudane Cadaani in halganka Somalida Ogadenya uu yahay mid shacab oo is kutashi ah isagoo si waafi ah uga hadlay mowqifka JWXO ee ah inaan wax kayar xornimo u cuntami karin taana ay higsanayaan meelna ay uga soo wadajeesteen cadowga Somaliyeed iyo cadowga umada
Somalida Ogadeniya ee mudada dheer gumaysiga kujiray. Wuxuu ku booriyay dadwaynihii madasha iskugu yimid ineey si buuxda uga qayb qaataan halgankan oo ah halgan umad soomaaliyeed oo gumaysi kuhoos jirta hadalkaas kasoo yeedhay Mudanaha aad baa loogu diirsaday.
Munaasabadii sanadguurada 31aad ee aasaaska JWXO ee lagu qabtay magaalada Edmonton waxay u dhacday si heersare ah kuna dhamaatay jawi aad u wanaagsan.